အဖြူရောင်လမ်းကလေး: " အဲဒီလို မလုပ်ကြပါနဲ့ "
Posted by ဆူးသစ် at 10:24 PM
ခုန်တော့မချချင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့မွန်းကြပ်ညစ်တယ်ကွယ်။ ဖွင့်ပြောရမဲ့သူလဲမရှီဘူး ခက်တယ်။ အစအဆုံးပြောချင်တာ psy conselling နဲ့သွားတွေ့ရင်တော့အစအဆုံးနားထောင်ပေးမှာလားဒါပေမဲ့သူလည်းဇတ်ရည်လည်မှာမဟုတ်ဘူး အကောင်းဆုံးကတော့ငယ်သူငယ်ချင်း ကိုယ့်ကိုအချိန်ပေးနိုင်မဲ့သူပေါ့. ရှိတဲ့သူလဲ မရှိရှာတော့ဘူး. ရှိတဲ့သူတွေကလည်းမအားကြဘူး နားထောင်ချင်ပါတယ် .မအားကြဘူး အားတဲ့သူတွေကလည်းအခုမှသိတဲ့သူတွေဇတ်ရည်လည်နိုငမှာမဟုတ်ဘူး. ဟင်း......
တိုင်းတစ်ပါးရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ ဘေးရန်ကင်းပြီး စိတ်ကျန်းမာ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိကြပါစေဗျာ .. ဒီလိုသတင်းတွေကြားရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး .. အားလုံးကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
ဟုတ်တယ် .. ခဏခဏ အဲ့လိုတွေ ခုန်ချနေကြရင် မကောင်းဘူး ..
အင်းလေ.. အဲ့လိုတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့ ..
လူတိုင်းမှာ စတွက်နဲ့ စိတ်ညစ်စရာဆိုတာ ရှိကြတာပါပဲ ..
စိတ်ညစ်စရာ နည်းတာများတာပဲ ကွာမယ်..
ပြန်စမ်းရတယ် .. :P
တစ်ကယ့်ကို ကြားရတာ ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းတွေပါပဲအကို...:(
'မိုးလင်းမိုးချုပ် အလုပ်လုပ်၍ ဘ၀ပျောက်နေသော နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ့်ဘာသာရှာယူနေရမယ်' ဆိုတဲ့ ဆူးသစ်ရဲ့